(tonga teto avy amin'ny Toetany)
Ny toe-tany dia ny tsinjara araka antontanisan' ny toetran'ny atmôsferan'ny tany eo amina faritra iray mandritry ny vanim-potoana iray. Haitoe-tany no anaran' ny taranja mandinika ny toe-tany. Samihafa amin' ny haitoetrandro na meteôrôlôjia ny haitoe-tany noho ity farany mandalina ny toetrandro amin' ny fotoana fohy sy amin' ny toerana voafetra.
Ny tany efitra mafana eto ambonin’ ny tany dia hita ao amin’ ny faritra manana toetanin-jana-pehin-tany, toy ny ao amin’ ny tany efitr’ i Sahara ao Afrika, ny tany efitr’ i Victoria ao Aostralia.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Toe-tany&oldid=998846"
Dernière modification le 11 Desambra 2020, à 10:37
Voaova farany tamin'ny 11 Desambra 2020 amin'ny 10:37 ity pejy ity.